တောင်သမန်သားလေး: ♪ Facebook မှာ သင့်ရဲ့ Friend Request ကို လျစ်လျူရှုထားသူများအားလုံးကို ကြည့်ရှုနည်း ♫
♪ Facebook မှာ သင့်ရဲ့ Friend Request ကို လျစ်လျူရှုထားသူများအားလုံးကို ကြည့်ရှုနည်း ♫
Facebook အသုံးပြုသူများအတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်ထံ Friend Request ပေးပို့ထားပေမယ့် လျစ်လျူရှုထားသူများကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲဒီ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ အပြင်လောကမှာ သင်နဲ့ သိကျွမ်းသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိကောင်း ရှိလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကို လျစ်လျူရှုထားသူတွေကို သိခြင်းအားဖြင့် ပြင်ပကမ္ဘာမှာ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို သင့်ရဲ့ Friend Request ကို လျစ်လျူရှုထားသူများကို သင် ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ ? သင့်ရဲ့ Facebook မှ Digital Relationship ကနေ သင့်ကို လျစ်လျူရှုထားသူများကို သိနိုင်ဖို့ Facebook က နည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။
Facebook ၀က်ဆိုက်ကိုသွားပြီး သင့်ရဲ့ အကောင့်နဲ့ Login ၀င်ပါ။ အပေါ်ထိပ်မှ Friends Icon ကို နှိပ်ပါ။
Drop-Down List ရဲ့ အောက်ခြေမှ See All ကို နှိပ်ပါ။
ဒီစာမျက်နှာမှာတော့ သင့်ထံ Friend Requests ပေးပို့ထားပြီး သင်က လျစ်လျူရှုထားသူများကို ပြသပေးထားပါတယ်။ ပြန်လည် စိစစ်ပြီး သူငယ်ချင်းအဖြစ် လက်ခံချင်သူများကို Confirm လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Friend Requests ကို လျစ်လျူရှုထားသူများကို ကြည့်ရှုဖို့အတွက် အပေါ်ထိပ်မှ View Sent Requests ကို နှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် သင်က Friend Requests ပေးပို့ထားပေမယ့် သင့်ကို သူငယ်ချင်းအဖြစ် လက်မခံဘဲ လျစ်လျူရှုထားသူများ အားလုံးကို ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Friend Request Sent ခလုတ်အပေါ်ကို Mouse Cursor တင်ထားရင် Drop-Down Menu တစ်ခုကို ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပြီး Follow မလုပ်ချင်ရင် Cancel Request ကို နှိပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်အဆင့်မှာ Confirm လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by lin linn at 5:59 AM
မြန်မာစာကပ်နေတဲ့ Samsung Galaxy မိုဘိုင်းဖုန်းတွေတ...
Facebook Lock ကျရင်ရွေးခိုင်းတဲ့ Friends ၅ ဦးကို ...
၁၀၀% မြန်မာမှန်ကန်အောင်ထည့်ပေးနိုင်တဲ့ MPPG Font T...
Samsung နှင့် Oppo ဖုန်းများတွက် Root မလို မြန်မာေ...
T-Shit အင်္ကျီဒီဇိုင်းတွေကို နှစ်သက်သလိုဖန်တီးနိုင်...
Mp4 ကနေ Mp3 ပြောင်းမယ်
2D ၂လုံးထီကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ မိုဘိုင်းApp
နှစ်တစ်ရာ မြန်မာပြက္ခဒိန် Myanmar Calendar v1.2.2 A...
YouTube က ဗီဒီယိုကို Mp3 အဖြင့်တိုက်ရိုတ်ဒေါင်းယူန...
ဘယ်သွားသွား လမ်းမပျောက်အောင် လမ်းပြပေးမယ့်ဆော့ဖ်ဝဲ...
Facebook မှာ မြန်မာစာမမှန်တဲ့ ဖုန်းတွေတွက် မြန်မာစ...
စမတ်ဖုန်း Lollipop ဗားရှင်းများနဲ့ Myanmar font Ch...
Android Phone မှာ နေရာလွတ်တွေ ရအောင် လုပ်မယ်
Mobile ဖုန်းများမှ Messages (SMS) တွင် မြန်မာစာမပေ...
VIVO Y22 ကို iRoot , KingRoot Tool နဲ့ Root မပေါက်...
Viber 6.0.2.22 (226) Latest Version
ဖုန်းမှာ ကွန်ပျူတာလို လန်းနိုင်မယ့် Apk
Smule Sing v3.7.5 Apk
"Facebook မှာ Birthday ပြောင်းလို့ရအောင်လုပ်မယ်"
Root လုပ်ထားသော Android OS ဖုန်းများတွင် OTA Updat...
iPhone, iPad, iPod, Mac ဖုန်းတွေဖျောက်သွားခြေခံလို...
Facebook မှာ Video တွေကို ချက်ချင်းတိုက်ရိုတ်ဒေါင်...
Samsung တွေပါဝါပြန်မတတ်တော့ရင် ဖြေရှင်းနည်း (ကွန်ပ...
ဆော့ဝဲလ်ဘုရင် နဲ့ App တစ်ခုကို ဖုန်းမှာအများကြီးခွ...
ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ရုံနဲ့ ဘာသာစကား ၂၁ မျိုးအထိ ဘာသြာ...
မြန်မာနာမည်တစ်လုံးထဲနဲ့Facebook Account ဖွင့်နည်...
YouTube ထဲက Video များကို ADM Apps ဖြင့်လျှင်မြန်စ...
Incoming Call တွေ Message တွေကိုအတုယောင်ဖန်တီးပြီး...
Flash Alert on Call And Sms v1.0 Apk
Play Store မှ Update App တွေကို အော်တိုဒေါင်းလုပ်မ...
KingRoot v4.92 ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ
Samsung S6 EDGE အချို့မှာ CROM (OEM) Lock ဖြစ်နေလိ...
Samsung Korea အလုံးတြေမွာ Network Modeျေပာင်းလို့...
Android 6.0 Marshmallow ထိ Root ပေါက္တယ္ဆိုတဲ့ KingR...
ဖုန်းနဲ့ YouTube ပေါ်ကို Video တင်နည်း
Android ဖုန်းတွေမှာ 4G သုံးလို့ရအောင်
Facebook ID တင်နည်း
လက်ခုပ်တီးပြီး ဖုန်းFlashမီး ကိုအဖွင့်အပိတ် ထိန်းခ...
ကိုယ့် Facebook ကို ဘယ်သူ Login ၀င်ထားလဲ ဘယ်ကနေ၀င်...
ဖုန်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ မြန်မာဝက်ဆိုဒ် နှစ်ခုပါ...
သင့်ချစ်သူကို ရည်းစားစကားပြောဖို့ကာတွန်းလေးကိုအက...
Android မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် ဖြစ်တတ်တဲ့" Downloa...
ဓာတ်ပုံမှာစကားပြောပြီး သူငယ်ချင်းတွေစီပို့ ကြမယ်
Video ကနေ Gif ပြောင်းပြီး Facebook ပေါ်သို့တင်ကြမယ်...
Windows 10 မှာ Unicode Font နဲ့ Zawgyi Replace Fon...
RECYCLER Virus သတ်နည်း (100% Working)
Google Nexus6ဖုန်းအတွက် Android N NPD35K (Develo...
2016 SAMSUNG Phone များအား Theme Store ​ပေါ်မှာ ပို...
Root နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေပါ
Mp3 သီချင်းတွေမှာဓာတ်ပုံထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ iTag Pro...
facebook တွင်ရက်ပေါင်း၆၀ မစောင့်ဘဲ Name ပြောင်းလဲန...
Viber code ယူနည်း
ဗွီဒီယို နှင့် ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်များအတွက် ရှာဖွေလို...
မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်ဘာသာစကားသီးသန့် ဘာသာပြန်မယ် Myan...
Facebook မှာ မကောင်းတဲ့ Sex post တွေတက်နေတာကိုပိတ်...
ဗီဒီယိုတွေကို ဒေါင်းယူနိုင်တဲ့ videoder v11.0.3 Ap...
မိမိအိပ်ယာ မှ မနိုးသေးလဲ မိမိချစ်သူကို SMS ပို့ ထာ...
Facebook မှာ ကိုယ်နဲ့Friend မဖြစ်သေးတဲ့သူက Comme...
ဖုန်းတွေမှာ မိမိပုံလေးတွေနဲ့Video အကောင်းဆုံးဖန်...
ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံထဲနဲ့Video ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Love Vi...
Facebook မှာ ဗီဒီယိုဒေါင်းယူကြမယ် ဒီတစ်ခါအလွယ်ဆုံး...
အရင်ကထက် အဆများစွာလန်းတဲ့ အသစ်ထွက်လာပြီ....Messeng...
Nyi Nay Min - Animals1 Font